Tababare Unai Emery Oo Shaaciyay Tirada Ciyaartoyda Ay La Soo Saxiixanayso Kooxdiisa Arsenal Iyo Shuruuda Uu Ku Xidhay. - Gool24.Net
Tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa shaaciyay tirada ciyaartoyda uu doonayo in ay kooxdiisu la soo saxiixato xagaagan balse waxa uu muujiyay in ay samir u baahan yihiin si ay u helaan saxiixyada ugu fiican ee xalka u noqon kara kooxdiisa Gunners.
Unai Emery ayaa qiray in ciyaartoy ay doonayaan ay qiimo dhaaf ku yihiin laakiin waxa uu hoosta ka xariiqay in ay samir u leeyihiin in ay sugaan suurtogalnimada ay xidigahan ku heli karaan.
Unai Emery ayaa sheegay in ay kooxdiisu la soo saxixian doonto ilaa afar ciyaartoy balse waxa uu ku xidhay shuruud ah in ay noqdaan kuwo xalka ugu fiican u keeni kara kooxiida Gunners.
Ciyaartoyda qaaliga ah ee uu Emery sheegay in ay sugayaan ayaa markiiba loo fahmi karaa in uu yahay Wilfried Zaha oo ay hore Gunners uga gudbisay dalab 40 milyan gini ah oo kala badh ka ah lacagta ay Crystal Palace ku qiimaynayso.
Unai Emery oo ka hadlaya suuqa kala iibsiga kooxdiisa ayaa yidhi: “Xaqiiqdii anigu samir ayaan u leeyahay,sababtoo ah waxaanu doonaynaa in aanu doorano xalka ugu fiican. Ciyaartoyda qaarkood aad ayay qaali u yihiin isla markaana waxaanu sugaynaa suurtogalnimada”.
“Hadda ma doonayno in aanu xariiqda labaad ee ciyaartoyda u socono, waanu sugaynaa , waxaanu haysanaa ciyaartoy aad u fiican. Waxaanu haysanaa ciyaartoy da’yar ah oo aad u fiican, sidoo kale waxaanu ka war qabnaa in aanu u baahanahay in aanu kooxda ciyaartoyda qaar ku soo horumarino” ayuu Emery hadalkiisa raaciyay.
Unai Emery oo ka hadlaya tirada ciyaartoyda ay kooxdiisa Gunners suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ka doonayso ayaa yidhi: “Waxaan doonayaa in aanu la soo saxiixano, kow, laba, saddex ama afar ciyaartoy, waana kaliya haddii ay hubaal tahay in ay u imanayaan in ay kooxdayada horumar ku samaynayaan”.
Arsenal ayaa ugu yaraan doonaysa in ay la soo saxiixato saddexda xidig ee kala ah William Saliba oo ay heshiis buuxa la gaadheen, Wilfried Zaha iyo Kieran Tierney oo dalabyadii hore laga soo diiday.